Nampitandrina Mpanao Gazety sy Mpikatroka Rosiana Am-polony Ny Google Manoloana Ireo Mpijirika Tohanan’ny Fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2016 9:42 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, Deutsch, English, Español, English
Ampolony mahery ireo mpanao gazety sy mpikatroka Rosiana nahazo fampitandremana hafahafa avy amin'ny Google androany vao maraina, mampahafantatra azy ireo fa “ny mpanafika tohanan'ny governemanta” dia mety “hiezaka hangalatra” ny tenimiafin'izy ireo. Araka ny filazan'ny fanairana ara-piarovana, nilaza i Google fa “tsy afaka milaza izay nanome ny vaovao [izy] satria hahafantatra sy hanova tetika ireo mpanafika.”, Nilaza ny orinasa fa mihatra amin'ireo ” latsaka ny 0,1 isanjato amin'ny mpisera Gmail rehetra” ireo fanafihana ireo.
Araka ny filazan'i Oleg Kozlovsky, mpanohitra mpikatroka, olona 16 farafahakeliny no nahazo fampitandremana avy amin'ny Google—anisan'izany i Bellingcat, mpikaroka, sy i Aric Toler mpikambana ao amin'ny RuNet-Echo. Nilaza i Kozlovsky fa nampitandremana izy sy i Elena Panfilova, filoha lefitry ny Transparency International, sy i Maksim Kats, mpikambana teo aloha tao amin'ny filankevitry ny tanànan'i Moskoa, ary i Ilya Klishin, ilay mpanao gazety sy ny maro hafa.
(tsy mailaka famitahana, fanairana nivoaka tao amin'ny kaontiko Gmail ankehitriny)
Nilaza i Alexey Shlyapuzhnikov, mpanolo-tsaina ara-piarovana ao amin'ny Transparency International fa, amin'ny ampahany, nikendry anaran-tsehatra telo an'ny fikambanana tsy miankina, sy adiresy mailakan'ny mpiasa ao amin'ny biraom-paritra sy iraisam-pirenena ireo mpanafika.
Nanao tsoa-kevitra ilay manam-pahaizana momba ny fiarovana antserasera ao amin'ny “Ekipan'ny Fikarohana ThreatConnect” tamin'ny volana lasa fa ny mpanorina ny Bellingcat, Eliot Higgins sy ny sasany amin'ireo mpikaroka ambony ao aminy, anisan'izany i Toler dia efa lasibatra tamin'ny hetsika fanjonoana goavana miaraka amin'ny tetikady, teknika, sy dingana ampiasain'ny vondrona mpijirika “Fancy Bear”, izay efa voarohirohy tamin'ny fanafihana ny Dinam-pirenena Demaokraty, ny Sampana Iraisam-pirenena Miady amin'ny Fihinanana Fanafody mampatanjaka, sy ny Fitsarana Misahana ny Fanatanjahantena.
Mpandray anjara lehibe tamin'ny fanadihadiana iraisampirenena momba ny fitifirana ny Zotram-piaramanidina Malayziana 17 (MH17) tao Okraina tamin'ny 2014 ny Bellingcat .
Nilaza i Toler fa nahazo mailaka am-polony mampitandrina azy amin'ireo fikasana hanala hidy (login) tsy nahazoan-dalana izy, mandrisika azy hijery ny zava-misy ao amin'ny kaontiny ary hanova ny tenimiafiny. Toa tahaka ny ara-dalàna ny rohy nomena tao amin'ny mailaka, saingy fikasan-dratsy hangalatra ny lahatahirin'ilay olona izany, miafina ao ambadiky rohy nohafohezina .cc .
Ity no saiky fotoana voalohany ahitana ireo olona mifandray amin'ny haino aman-jery tsy miankina Rosiana lasibatra ao anatin'ny ezaka fijirihana. Tamin'ny Septambra 2015, nitatitra ny tonian-dahatsoratra sady mpanao gazety ao amin'ny Novaya Gazeta fa lasibatry ny olona nahazo dika mitovy tsy nahazoan-dalana tamin'ny karatra SIM azy ireo tany amin'ny mpamatsy tolotra finday ny mailaka fandraisan-kafatr'izy ireo.
Tamin'ny Aprily 2016, nilaza ireo mpanao gazety Rosiana maromaro, anisan'izany i Roman Shleynov, niara-niasa tamin'ny Tetikasa Fitoriana Kolikoly sy Andian-jiolahy amin'ny fanadihadiana “Panama Papers” fa nahazo fampitandremana ara-piarovana avy amin'ny Google izy ireo ny amin'ny mety hisian'ny fikasana hijirika [nahazoana fankatoavana avy amin'ny fanjakana] ny kaonty mailak'izy ireo.
Tamin'ny 29 Aprily, nitatitra ireo Rosiana mpikatroka roa avy amin'ny fanoherana – anisan'izany i Oleg Kozlovsky fa voajirika avy any lavitra ny kaonty Telegram fandefasan-kafatra azy ireo. Nilaza izy ireo fa azo tamin'ny alalan'ny fanodinana endrin-javatra fidirana SMS amin'ny fampiharana ny fidirana tsy nahazoana alalana tao amin'ny kaontin'izy ireo. “Tsy misy ny fisalasalana fa nomanina ary ampiharin'ny Sampam-pitsikilovana Federaly ao Rosia amin'ny ampahany ity hetsika manokana ity,” araka ny famintinan'i Vladislav Zdolnikov, manam-pahaizana momba ny teknolojia ary miara-miasa amin'ny Fikambanana Miady amin'ny Kolikoly an'i Alexey Navalny.
Tamin'ny Jona 2012, nanaparitaka fampitandremana ho an'ireo mpiserasera heveriny fa lasibatry ny fanafihana tohanan'ny fanjakana ny Google. “Raha mahita ity fampitandremana ity ianao, tsy voatery midika izany fa voajirika ny kaontinao,” araka ny fanazavan'i Eric Grosse, filoha lefitry ny injenieran'ny fiarovana ao amin'ny Google. “Midika fotsiny izao fa mihevitra izahay fa mety ho lasibatra ianao, lasibatry ny fanjonoana (phishing) na rindrampisompatra ohatra, ary tokony handray fepetra avy hatrany ianao mba hiarovana ny kaontinao.”